ရုရှားနိုင်ငံမှ မိန်းကလေးတစ်ဦး၏ ချစ်စရာကောင်းသော လိုချင့်စဖွယ် Husky ပုံ (၂၆) ပုံ - ONE DAILY MEDIA
ရုရှားနိုင်ငံမှ မိန်းကလေးတစ်ဦး၏ ချစ်စရာကောင်းသော လိုချင့်စဖွယ် Husky ပုံ (၂၆) ပုံ
Huskies များသည် မယုံနိုင်လောက်အောင် ထက်မြက်သည့်အပြင် ဝံပုလွေများနှင့် ခပ်ဆင်ဆင်တူပြီး “တောက်ပသော မျက်လုံးများနှင့် ထူထဲသောအမြီး” များရှိသည့် ခွေးလေးများဖြစ်ပါတယ်။ ရုရှားနိုင်ငံ၊ စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့မှ ဓာတ်ပုံဆရာ Erika Tcogoeva ဟာ Husky ချစ်မြတ်နိုးသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည် ဤလှပသော ခွေးများနှင့် မယုံနိုင်လောက်စရာ ဆက်ဆံရေးများကို ပြသသည့် ဓာတ်ပုံများကို မျှဝေခဲ့ပြီး ယခု ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး Husky-cuteness ၏ အစိတ်အပိုင်းကောင်းတစ်ခုကို ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ် ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ခွေးအားလုံးကို ချစ်မြတ်နိုးသော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံတွင် တစ်မျိုးတည်းကိုသာ ရွေးချယ်လိုပြီး ယနေ့ကတော့ Husky နေ့ဖြစ်ပါတယ်
A post shared by Erika Tcogoeva (@erikaeasy)
(၂) တောက်ပသော မျက်လုံးများနှင့် ထူထဲသောအမြီး များအစပြုရာ
(၃) Huskies နှင့် နှင်းများ၏ လိုက်ဖက်မှု
(၄) Say “Cheese.”
(၇) ဘယ်လိုနေနေ ချစ်စရာကောင်းနေမှု
(၉) So precious!
(၁၁) ပြီးပြည့်စုံသော အဝန်းအဝိုင်း
(၁၃) ဘယ်သူပိုကြီးလဲ ?
(၁၆) လက်ဆောင်လိုချင်လား ?
(၁၈) ကစားဖို့နဲ့နားဖို့ အမြဲအဆင့်သင့်ပဲ
(၁၉) အိပ်ပျော်နေသော ခွေးပေါက်လေး ၅ ကောင်ကို မြင်ရတာလဲ ကြည်နူးစရာပါပဲ
(၂၀) စိတ်ချရသောလက်တစ်စုံအတွင်းမှ အိပ်မက်လှလှ
A post shared by OVShowSiberians (@olgivanshow)
(၂၂)” Sir Huskydad လို့ နာမည်ပေးလိုက်တယ်”
(၂၃) ကလေးအတွက် ဆွယ်တာလေးတစ်စုံ
(၂၄) Happy puppy, happy mom
(၂၆) တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော သံယောဇဉ်
သင်ရော Huskies ကြိုက်လား သို့မဟုတ် သင်ရော huskies ပိုင်ရှင်ဖြစ်ချင်ပါသလား။ မှတ်ချက်များတွင် သင်၏ အိမ်‌မွေးမိသားစုဝင်လေးများ၏ ပုံများကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပြပြီး ဤဆောင်းပါးကိုလည်း သင့်သူငယ်ချင်း ၊မိသားစုများထံ မျှဝေပေးနိုင်ပါတယ်။
အနက်ရောင်‌ခြေ‌ချောင်း၊ ကြက်သွေးရောင် ကိုယ်ထည် ၊ အပြာရောင် Eyeshadow တို့ဖြင့် ဖက်ရှင်ကျနေတဲ့ Malabar Trogon ငှက်
အဝါ-နက်ပြာ-မိီးခိုးရောင် ပေါင်းစပ်အမွေးမျှင်၊အနီရောင် Mohawk တို့ဖြင့် ထင်ရှားသော collared-redstart ငှက်ငယ်လေးများ